वाग्मती प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की नेतृ मीना लामा निर्वाचित भएकी छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गत सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट निर्वाचित भएकी लामासँग यसअघि उपमेयर सम्हालिसकेको अनुभव छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मतदाताले यस पटक युवा रोजेका छन् । दलका उम्मेदवारलाई अस्वीकृत गर्दै मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार वालेन्द्र साहलाई रोजे । उपमेयरमा भने नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बनेकी २९ वर्षीया सुनिता डंगोललाई निर्वाचित गराए । तर महानगरका धेरैजसो वडाहरुमा भने नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरुले जितेका छन् ।
मुलुकको राजधानीसमेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह ६१ हजार ७ सय ६७ मतसहित प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् । उनले सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सिर्जना सिंह र नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार केशव स्थापितलाई पराजित गरे ।
जनमत र गठबन्धनभित्र पनि अलगअलग पार्टी छन् भन्ने मान्दा अहिले पनि ठूलो र स्थानीय तह निर्वाचनले प्रमुख राजनीतिक दलहरुको शक्ति अदलबदल गरेको छ । पहिलो पार्टी बन्ने घोषणा गर्दै सत्ता गठबन्धनसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएको एमाले दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ ।
काठमाडौैं महानगरपालिकामा चुनावी प्रचार तीब्र छ । सत्ता गठबन्धनभित्रबाट कांग्रेसले मेयर पाउँदा उपमेयर पद नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको छ । एमालेबाट सुनिता डंगोल उम्मेदवार छिन् भने सत्ता गठबन्धनबाट रामेश्वर श्रेष्ठ ।
चिकित्सा शिक्षामा स्नातक (एमबीबीएस) सकेर भारतको नयाँदिल्लीमा काम गरिरहेका २७ वर्षीय मो. राजिक आलम रौतहटको राजपुर नगरपालिका प्रमुखमा उम्मेदवार बनेका छन् । कांग्रेसले बहालवाला मेयरलाई पन्छाएर राजिकलाई टिकट दिएको छ तर उनको परिचय यतिमा सीमित छैन । उनी २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा बम बनाइरहेका बेला विस्फोट हुँदा घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा हालेर ज्यान लिएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा रहेका सांसद मो. अफताब आलमका कान्छा छोरा हुन् ।